Araka ny fanentanana nataon’izy ireo tetsy Analakely dia mankahery ihany koa ireo efa nandrotsaka vato fotsy izy ireo hanohy hatrany ny ataony ary miantso ireo tsy tonga tamin’iny 7 novambra iny kosa mba ho tonga amin’izay amin’ny 19 desambra izao hifidy ary handrotsaka ny vaton’izy ireo ho an’ny kandida Vato fotsy. Nanafatra ireo kandida ho filoham-pirenena roalahy koa izy ireo fa rehefa tafapetraka eo amin’ny fitondrana ny iray amin’ireto mpifaninana ireto dia hanolotra volavolan-dalàna mikasika ny fanisana vato fotsy ity hetsika ity. Antony dia ny fiantraikan’ny habetsaky ny vato fotsy no misoroka ny krizy aorian’ny fifidianana. Tany Mongolie, ohatra, dia elanelam-bato miisa 200 no nahalany ny filoham-pirenena vaovao. Misy lanja be dia be eo amin’ny sehatra iraisampirenena iny, hoy izy ireo. Efa niaraha-nahalala fa tsy nanara-dalàna ny fifidianana, ratsy fanomanana ary tery vay mantan’ny fianakaviambe iraisampirenena saingy tsy nihodivirantsika ka ny mandrotsaka vato fotsy no mety indrindra. Nanomboka omaly moa ny fampielezan-kevitr’ity hetsika ity ary hitohy toy ny an’ireo kandida roa hafa ihany koa.
J. Mirija / Marigny A.